Fanajariana ny tany :: Andrasana ny sazin’ireo tratra nanototra tany tsy ara-dalàna teny Tsarasaotra • AoRaha
Fanajariana ny tany Andrasana ny sazin’ireo tratra nanototra tany tsy ara-dalàna teny Tsarasaotra
Taorian’ny fanagiazan’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy ny fiara lehibe telo tratra nanototra tany tsy ara-dalàna, tetsy Tsarasaotra, dia andrasana ny sazin’ireo tompon’antoka, raha tokony ho nivoaka omaly izany. Raha tsiahivana dia fiara lehibe efatra saika hanototra tany tsy ara-dalàna teny amin’ny sampanana Tsarasaotra no tratran’ny tompon’andraikitry ny minisitera, ny sabotsy lasa teo. Voasambotra ary nampidirina trano fihibohana ny fiara telo raha toa ka tafatsoaka ny iray.
Tsy nanana taratasy fahazoan-dalana ahafahana manototra ity toerana ity izy ireo. Taratasy fanomezan-dalana hanorina no ananan’ny tompon’ny tany fa tsy fahazoan-dalana manototra, raha ny fanazavana. Raha ny fitantaran’ireo manodidina dia misy hikasa hanorina fotodrafitrasa eo amin’io toerana io ka anton’izao fanotofana izao. Nivoaka ny didy fampiatoana ny fanotofana tany eo amin’io faritra io amin’izao fotoana izao.
Raha tsiahivana dia efa nisy fiarabe efatra tra-tehaky ny minisitera tamin’ny volana aogositra 2018, teny amin’ny faritra Anosivavaka ka naiditra trano fihibohana ihany koa. Nohamafisin’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany ny fanaraha-maso ny fanotofana tany tsy ara-dalàna amin’ireo faritra iva eto an-drenivohitra taorian’ny faikaran’ ny rano rano vokatry ny rotsak’orana.
Fanajariana ny tany :: Andrasana ny sazin’ireo tratra nanototra tany tsy ara-dalàna teny Tsarasaotra - ewa.mg dit :
[…] Fanajariana ny tany :: Andrasana ny sazin’ireo tratra nanototra tany tsy ara-dalàna teny Tsarasao… est apparu en premier sur […]
Fampianarana :: Hitohy ny fanomezana vatsim- pianarana avy amin’ny Maraokanina